Home Wararka Maxa ka soo baxay kulankii qarsoodiga ee Farmaajo, Fahad, Qaybdiid, Rooble &...
Maxa ka soo baxay kulankii qarsoodiga ee Farmaajo, Fahad, Qaybdiid, Rooble & Qoor-Qoor?
Labo habeen ka hor waxaa ka dhacay Xarunta Villa Soomaaliya kulan albababada u xirnayd oo ay ku kulmeen shan qofood (Farmaajo, Fahad, Qaybdiid, Rooble & Qoor-Qoor) oo ujeedadiisu ahayd in la sii adkeeyo isbahaysi laga saameyey daahada gadaadiisha.
Kulanka ayaa waxa uu daba socday kulamo gaar gaar ah oo qadka teleefanka oo u dhaxeeyey Qoor Qoor, Fahad iyo Farmaajo oo dhinac ah iyo Rooble oo dhinaca kale ka soo jeedo iyada oo uu wakiil ka ahaa Qoor Qoor.
Kulankii habeen hore ayaa markii hore waxa aan ku jirin Senator Cabdi Cawaale Qaybdiid, laakiin gadaal ayaa looga soo daray kadib markii la xaqiijiyay in Cabdi Qaybdiid uu saameyn ku leeyahay RW Rooble, go’aanada uu qaato Rooble-na si beel ah (Sacad, Reer Hiloowle) looga wada tashado.
Kulanka ayaa salka ku haayay aragtida ah in Qoor Qoor uu markale xaqiijiyo in RW Rooble uusan ku balan furaynin MW Farmaajo, culayskastaa ee laga soo saaro dhanacyada kala duwan ee siyaasadda dalka isku haysa.
Qoor Qoor iyo Rooble ayaa dhankooda ka abaal celiyay magacaabida uu Farmaajo Beesha Habaergedir ka soo magacaabay Ra’iisal Wasaaraha, isla markaana aan an marnaba looga bixi doonin heshiisyadii hoose ee labada dhican wadagaleen.
Cabdi Qaybdiid oo inta uu kulanka socday aamusnaa, ayaa dhankiisa xaqiijiyay in isaga uu mas’uul ka noqon doono in wixii lagu heshiiyay aan marnaba laga bixin. Waxa uuna xusay talaabadii horay loo qaaday e dib looga noqday waqti kordhinta ay mas’uuliyadeeda leeyahay Farmaajo madaama uu maqli wayay talooyinkii horay loogu soo jeediyay.
“Farmaajo, anaga ayaa kaa jecel in aan ku sii nagaano kurisga Ra’iisal Wasaaraha oo mudo 60 sano ah sugaynay, marnaba ha ka baqin in la qaado ficil ka soo horejeedo qodobada uu hada ka dhawaajiyay Madaxweyne Qoor Qoor” ayuu yiri Cabdi Qaybdiid.
Kukankaas oo socday mudo ka badan saacad iyo bar ayaa u muuqday in Farmaajo lagu siiyay kalnooni iyo damiin ah in aan marnaba la marsiin doonin shirka wadatashiga doorashooyinka qodoba ka baxsan wixii uu Rooble iyo Fahad oo wadajira ku heshiiyeen.
Qoor Qoor ayaa dhankiisa balan qaaday in uu kulamo gaar gaar uu la yeelan doono MW Lafta Gareen iyo Cali Guudlaawe marka ay yimaadaan si loo xaqiijiyo in heshiiskii shan-geesoodka ahaa (Qoor Qoor, Farmaajo, Rooble, Lafta Gareen iyo Calli Guudlaawe) loo sii adkayn lahaa, iyada oo si isku mida looga horimaanayo qodobada ay ku adkeeysanayaan Puntland, Jubbaland iyo Mucaaradka.
Cabdiqani Carab oo xulkii qaranka u kala qaybiyay Qabiil & Qurbo-joog, fashilna ka dhashay
Dowlada Puntland oo markale si adag uga hadashay xeerka Gudniinka
Midowga Yurub oo dib u eegis ku sameynaya lacagta la siiyo ciidanka AMISOM ee Kenya
Al-Shabaab introduces Arabic curriculum in Somalia schools
Al-Shabaab militants have intensified their urge to change the status quo and hijack institutions in Somalia, targeting school syllabus as one of their strategies...
Cabdifatax Ibrahim (Ronaldo) - June 17, 2021
Taiwan will dispatch a medical mission to the self-governing African territory of Somaliland, the Ministry of Foreign Affairs (MOFA) said Wednesday in a statement,...
Cabdiqani Carab oo xulkii qaranka u kala qaybiyay Qabiil & Qurbo-joog,...